Izindaba - Okwengeziwe mayelana ne-pet pad/puppy pad?
Kufanele ngilalise nini umdlwane wami?
Isikhathi sokulala: Isikhathi sokulala esimisiwe senza ukulungisa kwakhe nokuqeqeshwa kwendlu kube lula kuwo wonke umuntu.Akukhathalekile ukuthi ihora lesi-8 ebusuku noma phakathi kwamabili, inqobo nje uma kuzoba umkhuba.Myise kukhreyithi yakhe futhi umsize ukuthi alale.
Ngingafutha ngani ukuze inja yami ingachami endlini?
Qala ngokwengeza amanzi akho ebhodleleni lesifutho.Okulandelayo, engeza 2 wezipuni uviniga omhlophe distilled.Ekugcineni, engeza amaconsi angu-20 amafutha abalulekile awolintshi.Fafaza kunoma iyiphi indawo ongafuni inja yakho isondele kuyo.
Mangaki amaphedi omdlwane okufanele ngiwabeke phansi?
Ngemva kwezinsuku ezimbalwa kudlula futhi uthola umqondo, susa 1-2 pads.Qhubeka nokukhipha iphedi njalo ezinsukwini ezimbalwa kuze kusele eyodwa kuphela.Kufanele akuqonde, kodwa uma esebenzisa indawo engenalutho, vele uqale phansi.Amathuba mahle kakhulu ukuthi umgomo wakho omkhulu uwukuba inja yakho yenze ibhizinisi layo ngaphandle phakathi nohambo nesikhathi sokudlala.
Isikhathi sokuthumela: May-31-2022
I-Sanitary Pad 245mm, I-Cotton Sanitary Pad, Ama-Lady Pads, Ithawula Abesifazane Abathambile, Female Sanitary Pad, I-Negative Ion Sanitary Napkin,